Litecoin gịnị bụ otu esi azụta ịzụta Litecoin? Ihe niile banyere LTC | Akụkọ akụrụngwa
Gịnị bụ Litecoin na otu esi azụta Litecoin?
Miguel Gaton | | Ego, General
Litecoin bụ isi-na-ebe dijitalụ ego (P2P) nke dabere na ngwanrọ mepere emepe na nke dakwasịrị ahịa na 2011 dị ka mgbakwunye na Bitcoin. Nke nta nke nta ọ na-aghọ ihe nzuzo nzuzo na-enweghị aha nke ọtụtụ ndị ọrụ na-eji, tumadi n'ihi ịdị mfe nke ụdị ego ndị a nwere ike ịmepụta, nke dị ala karịa nke Bitcoin.
Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ya ego dijitalụ ma ọ bụ mkpuchi ozugbo Bitcoins chetara. Mana ọ bụghị naanị nke dị na ahịa, dị anya na ya, afọ ole na ole, Ethereum aghọwo ihe dị njọ na BitcoinỌ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị dabere na uru nke ego ndị a ọ bụla, a ka nwere ụzọ dị anya iji bụrụ ezigbo ọzọ na Bitcoin, ego nke ghọrọ ụdị nke ịkwụ ụgwọ na ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ dịka Microsoft, Steam , Expedia, Dell, PayPal ịkpọ aha ihe atụ ole na ole.
Ị chọrọ tinye ego na Litecoin? Ọfọn nweta $ 10 FREE na Litecoin site na ịpị ebe a
N’isiokwu a anyị ga-egosi gị ihe niile ị chọrọ ịma gbasara Litecoin, ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ na ebe ị ga-azụ ya.
1 Gịnị bụ Litecoin
2 Ọdịiche dị n’etiti Litecoin na Bitcoin
3 Onye kere Litecoin
4 Kedu ka m ga-esi nweta Litecoins
5 Uru na ọghọm dị na Litecoin
6 Esi zụta Litecoins
Gịnị bụ Litecoin
Litecoin, dị ka ndị ọzọ nke dijitalụ ego, bụ na-amaghị aha cryptocurrency na e kere na 2011 dị ka onye ọzọ na Bitcoin, dabere na a P2P network, ya mere ọ dighi oge ọ bula nwere ike ichi ya, dị ka a ga - asị na ọ na - eme na ego gọọmentị nke mba niile, ya mere ọnụ ahịa ya dịgasị iche na mkpa. Amaghị aha ego a na-enye ohere zoo njirimara mgbe niile nke ndị na-ebu azụmahịa ahụ, ebe ọ bụ na a na-eme ya site na obere akpa eletrọniki ebe a na-echekwa ego anyị niile. Nsogbu dị iche iche nke mkpụrụ ego ndị a bụ otu ihe ahụ na mgbe ọ bụla, ebe ọ bụrụ na ha ezuru anyị, anyị enweghị ụzọ isi mata onye bupụrụ akpa anyị.
Ihe mgbochi, nke a maara nke ọma dị ka ngọngọ, nke Litecoin nwere ike ijikwa oke azụmahịa karịa Bitcoin. N'ihi na mmepụta ngọngọ na-adịkarị, netwọk na-akwado azụmahịa ndị ọzọ na-enweghị mkpa ịgbanwe software ahụ na-aga n'ihu ma ọ bụ n'ọdịnihu dị nso. N'ihi ya, ndị ahịa na-enweta oge nkwenye ngwa ngwa, Na-echekwa na ha nwere ikike ichere maka nkwenye ọzọ mgbe ha na-ere ihe dị oke ọnụ.
Ọdịiche dị n’etiti Litecoin na Bitcoin
N'ịbụ ndị na-ewepụta ma ọ bụ ndụdụ Bitcoin, ma cryptocurrencies na-eji otu sistemụ arụmọrụ yana isi ihe dị iche ọnụ ọgụgụ nke nde kwuru nde ego, emi odude ke ikpe nke Bitcoin na 21 nde, mgbe njedebe kachasị nke Litecoins bụ nde 84, Ugboro 4 ọzọ. A na - ahụta ọdịiche ndị ọzọ na ewu ewu nke ego abụọ, ebe Bitcoin bụ onye amaara ama, Litecoin dị ntakịrị ntakịrị na-eme nkụ na ahịa a maka ego mebere emepe.
Nweta $ 10 FREE na Litecoin site na ịpị ebe a
A na - ahụta ọdịiche ọzọ ma a bịa n'inweta ego mebere emepe. Ezie na Ngwuputa Bitcoin na-eji SH-256 algorithm, nke chọrọ nnukwu oriri processor, usoro nhazi nke Litecoin na-arụ ọrụ site na scrypt nke chọrọ nnukwu nchekwa, na-ahapụ ihe nhazi ahụ.
Onye kere Litecoin
Onye bụbu onye ọrụ Google, Charlie Lee, bụ onye na-akpata okike nke Litecoin, n'ihi enweghị ụzọ ndị ọzọ na ahịa ahịa ego na mgbe ha na-aghọbeghị ego mgbanwe mgbanwe maka ụdị ego ọ bụla. Charlie dabere na Bitcoin mana ebumnuche nke gbanwee ego a ka ọ bụrụ ịkwụ ụgwọ kwụsiri ike ma ghara ịdabere kpamkpam na ụlọ mgbanwe, ihe anyị nwere ike ịchọpụta anaghị eme na Bitcoin.
Ya mere na ịkọ nkọ emetụtaghị ego a, usoro iji nweta ha dị mfe ma nwekwaa oke, nke mere na ka e si kee ha, usoro a adịghị mgbagwoju anya ma ọ bụ belata ọnụ ọgụgụ ego ndị dịnụ. Ezubere Bitcoin iji were ego ruru nde iri abụọ na otu, mgbe na Litecoin e nwere 84 nde mkpụrụ ego.
Kedu ka m ga-esi nweta Litecoins
Litecoin bụ ndụdụ nke Bitcoin, otú ahụ ka software maka malite Ngwuputa Bitcoins bụ ihe dịka otu obere mgbanwe. Dịka m tụlere n'elu, ụgwọ ọrụ maka igwu ala Litecoins bara uru karịa Bitcoin. Ugbu a maka ngọngọ ọhụrụ ọ bụla anyị na-enweta 25 Litecoins, ọnụọgụ nke belata ọkara ọkara ọ bụla afọ 4 dịka, ọnụọgụ dị ala karịa ihe anyị hụrụ ma ọ bụrụ na anyị arara onwe anyị nye Bitcoins.
Litecoin, dị ka ihe mkpuchi ndị ọzọ niile, bụ ọrụ ngwanrọ na-emepe emepe nke ebipụtara n'okpuru ikike MIT / X11 nke na-enye anyị ohere ịgba ọsọ, gbanwee, detuo sọftụwia ahụ ma kesaa ya. A na-ahapụ sọftụwia ahụ na usoro ntụgharị nke na-enye ohere nkwenye nnwere onwe nke ọnụọgụ abụọ na koodu isi ha kwekọrọ. Enwere ike ịchọta sọftụwia dị mkpa iji bido Litecoins Akwụkwọ Litecoin, ma dị maka Windows, Mac, na Linux. Anyị nwekwara ike ịchọta koodu isi
Ọrụ nke ngwa ahụ enweghị ihe omimi, ebe ọ bụ naanị na anyị nwere budata mmemme ahụ ma ọ ga-amalite ịrụ ọrụ ya, na-enweghị anyị itinye aka n'oge ọ bụla. Ngwa ahụ n'onwe ya na-enye anyị ohere ịbanye na obere akpa ebe Litecoins niile anyị na-enweta na-echekwa yana site na ebe anyị nwere ike izipu ma ọ bụ nata ego ndị a na mgbakwunye na ịjụ azụmahịa niile anyị megoro.
Zọ ọzọ esi egwu Litecoins na-enweghị itinye ego na kọmputa, anyị hụrụ ya Scheriton, igwe ojii igwe egwuputa Nke anyị nwere ike iji nweta Bitcoins na Ethereum. Scheriton na-enye anyị ohere igosipụta GHz nke anyị chọrọ itinye na ntinye, ka anyị wee nwee ike ịzụta ike karịa iji nweta Litecoins ma ọ bụ ego ndị ọzọ anyị nwere ngwa ngwa.
Uru na ọghọm dị na Litecoin
Uru ndị Litecoin na-enye anyị bụ otu ihe anyị nwere ike ịchọta na ego ndị ọzọ nwere ego, dịka nchekwa na amaghị aha mgbe ị na-eme ụdị azụmahịa ọ bụla, enweghị ọrụ ebe ọ bụ na azụmahịa sitere n'aka onye ọrụ gaa na onye ọrụ na-enweghị ntinye aka nke usoro iwu na ọsọ ọ bụla, ebe ọ bụ na-enyefe ụdị ego a ozugbo.
Nsogbu kachasị na ego a taa na-eche ihu bụ na ọ bụghị ewu ewu ka Bitcoin nwere ike taa, ego nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile maara. N'ụzọ dị mma, n'ihi ewu ewu nke ego a, ihe ndị ọzọ dị na ahịa na-aghọwanye ndị ọrụ na-eji, ọ bụ ezie na ugbu a ha anọghị na ọkwa nke Bitcoin, ego nke ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ amalitelarị Jiri dika ugwo ugwo.
Esi zụta Litecoins
Ọ bụrụ na anyị ebughị n'obi ịmalite igwupụta Litecoins, mana anyị chọrọ ịbanye ụwa nke ego na-enweghị aha, anyị nwere ike ịhọrọ zuta ezigbo akwukwo site na Coinbase, kacha mma ọrụ ugbu a na-enye anyị ohere ịme ụdị azụmahịa ọ bụla na ụdị ego a. Coinbase na-enye anyị ngwa iji gụọ akaụntụ anyị n'oge ọ bụla maka iOS na gam akporo, ngwa nke na-enye anyị ozi zuru oke banyere mgbanwe mgbanwe nke ego ahụ nwere.
You chọrọ itinye ego na Litecoin?
Pịa Ebe a ịzụta Litecoin
Iji zụta ego ego a, anyị ga-ebu ụzọ tinye kaadị kredit anyị ma ọ bụ mee ya site na akaụntụ akụ anyị.
Echefula $ 10 FREE na Bitcoin site na ịpị ebe a!
Coinbase: Mgbanwe BTC, ETH, SHIBfree
Developer: Coinbase gam akporo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » Ego » Gịnị bụ Litecoin na otu esi azụta Litecoin?
Nke a bụ ihe Meizu M6 dị ka, ekwentị dị mma, dị mma ma dịkwa ọnụ ala